Shan dal ayaa Iran ka dalbaday magdhaw diyaaradii laga soo riday Yukreeniyaan Boeing
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Shan dal ayaa Iran ka dalbaday magdhaw diyaaradii laga soo riday Yukreeniyaan Boeing
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • Crime • Wararka Dowladda • Wararka Iiraan • News • Ammaanka • War Deg Deg Ah Sweden • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Wasiirka Arimaha Dibada ee Canada Francois-Philippe Champagne ayaa shaaca ka qaaday in Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden iyo Ukraine ay dalbanayaan in Iran ay ka bixiso magdhawga rakaab u dhashay Ukraine. Boeing 737 jet ayaa lagu soo riday gantaalada Iiraan.
Sida laga soo xigtay wasiirka, Iran waa inay si buuxda u qirataa mas'uuliyadda diyaaradda la soo riday iyo inay fuliso waajibaadka ka saaran qoysaska dhibanayaasha musiibada. Wadamadu waxay filayaan in magdhowga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay isla markaana waafaqsan sharciga caalamiga ah.
Intaas waxaa sii dheer, Champagne wuxuu ku baaqay baaritaan buuxa oo madaxbanaan oo lagu sameeyo dhacdada.
Kanada, Afgaanistaan, Boqortooyada Ingiriiska, Iswiidhan iyo Yukreyn ayaa sidoo kale abuuray koox gaar ah oo ehelka dhibanayaasha u sheegi doona halka ay marayaan baaritaanka iyo ka qeyb qaadashada bixinta gargaarka ay u baahan karaan.
Diyaaradaha Caalamiga ah ee Ukraine' Boeing 737 rakaab ah ayaa waxaa soo riday gantaalaha lidka diyaaradaha ee Iiraan waxayna ku dhacday 8-dii Janaayo magaalada Tehran. Natiijo ahaan, 176 qof ayaa ladilay - 167 rakaab ah iyo sagaal shaqaale ah. Kadib markii ay beenisay in ay wax lug ah ku lahayd shilka ayna sheegatay in diyaaradda ay soo degtay cilad farsamo awgeed, Iran aakhirkii waxaa hareeyay cadeymo aan laga doodi karin waxaana lagu qasbay in ay qirto mas'uuliyadda wixii dhacay: Shaqaalaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Iiraan ayaa ku andacooday in ay "si qalad ah" soo riday diyaarad laga leeyahay dalka Ukriane, maaddaama ay "ku khaldameen" gantaal dalxiis.
War degdeg AH Diyaaradaha Caalamiga ah ee Ukraine